Fampiharana Android: hevitra, famoahana vaovao, maimaim-poana ary maro hafa! | Androidsis (Pejy 18)
Ny fandefasana antontan-taratasy amin'ny WhatsApp no ​​zava-baovao amin'ny serivisy
Ny iray amin'ireo zava-baovao atolotry ny fampiharana malaza dia ny fahafahan'ny fandefasana antontan-taratasy amin'ny WhatsApp.
Olana mifanandrify amin'ny torimasoo? Mety ho ny efijery Android anao no manampy, ny Twilight dia manampy anao hiaro anao amin'ny fahazavana manga
Raha olona manana olana amin'ny torimaso tato ho ato ianao, dia mety amin'ny alàlan'ny efijery ny terminal Android-nao no mahatonga ny olana.
[APK] Misintona sy mametraka Android Auto noho ny Automate amin'ny Android rehetra
Androany izahay dia manazava ny fomba fametrahana Android Auto amin'ny Android rehetra noho ny Automate.
Threema, fampiharana fandefasan-kafatra izay miaro fiarovana
Threema dia ilay rindranasa mifantoka mivantana amin'ny fiarovana sy tsiambaratelon'ny mpampiasa, ka manalavitra azy amin'ny WhatsApp.
[ROOT] [XPERIA Z5 KEYBOARD] Sintomy ary apetraho ny kinova Xperia vaovao ho an'ny Android 4.4 na avo kokoa
Anio dia asehonay anao ny fomba fampidinana sy fametrahana ny kinova vaovao an'ny Xperia's Xperia keyboard, izay mahazatra an'ireo terminal Xperia toa ny Xperia Z5.
Fampiharana 2 hamoronana hitsin-dàlan'ny birao manokana
Fampiharana tsotra 2 hamoronana hitsin-dàlana namboarina tsy misy vinavina hafa noho ity. Maimaim-poana misintona.
[APK] Sintomy izao ny kinova vaovao an'ny Play Store miaraka amina endrika vaovao ho an'ny Android Marshmallow
Androany izahay dia mampiditra ny apk sy ny fomba fametrahana ny kinova vaovao an'ny Play Store miaraka amina endrika vaovao ho an'ny Android Marshmallow
Notify dia ny fampiharana Facebook vaovao izay havoaka tsy ho ela hanandrana handresy ny habaka fampandrenesana amin'ny karazan-baovao rehetra amin'ny fotoana tena izy.
Yahoo Mail 5.0 dia mitondra antsika amina fisehoan-javatra vaovao maromaro handraisana andraikitra toy ny lafiny fahitana vaovao sy ny mety fampiasana AOL, Outlook ary Hotmail.
Google Play Store dia haverina ho fampiharana / lalao video ary fialamboly amin'ny endrika vaovao
Tsy ho ela dia hanana ny fanavaozana vaovao an'ny Google Play Store izay hizara ny atiny ho fampiharana / lalao video sy fialamboly izahay.
Widget 7 izay tsy tokony hanjavona amin'ny findainao finday avo lenta
Widgets dia iray amin'ireo mampiavaka ny Android ka ireo fito ireo dia mety ho mora ampiasaina hanolotra famokarana bebe kokoa.
[APK] Afaka mandefa lalao amin'ny fitaovana Android anao amin'ny YouTube Gaming ianao izao
Miaraka amin'ny APK izay omenay anao dia azonao atao ny manomboka mandefa lalao amin'ny telefaona Android na takelaka misy anao amin'ny fampiharana YouTube Gaming.
Google dia mampiroborobo ny Google Play Music amin'ny horonantsary 360º
Google dia namoaka horonantsary 360º hampiroborobo ny Google Play Music.
Ny fampiharana Microsoft Dialer izay ho tonga amin'ny faran'ny taona hisolo ny iray amin'ny findainao
Ny rindrambaiko Dialer an'ny Microsoft dia mikendry ny ho fampiharana tianao indrindra amin'ny fiantsoana nentim-paharazana na amin'ny fampiasana fifandraisana 2G na 3G manomboka amin'ny faran'ny taona.
[APK] Topi-maso ireo rohy URL, inona no vaovao ao amin'ny WhatsApp
Endri-javatra iray izay efa elaela tao Telegram ary efa azontsika atao ny miditra amin'ny Whats App dia ny topi-maso ny rohy URL.
Ny fampiharana fandefasan-kafatra an-tserasera dia mandeha amin'ny encryption farany-to-farany
Fampiharana iray hafa izay mandeha amin'ny encryption farany-to-farany dia ny Line ary manaraka ny fironana napetrak'i Telegram sy ireo fampiharana hafa mitovy amin'izany
Crunchyroll, ilay fampiharana mamela anao hijery anime amin'ny fitaovanao Android
Crunchyroll, fampiharana Android izay ahafahanao mijery andian-tsarimihetsika misy audio sy dikanteny Japoney amin'ny fiteny maro, ao anatin'izany ny Espaniôla.
VLC 1.6 dia nohavaozina miaraka amin'ny alalana kely ilaina, fanatsarana ny fampisehoana ary ny fanohanan'ny 4K
VLC dia mahazo fanatsarana marobe amin'ny fanavaozana lehibe iray, izay manasongadina ny fihenan'ny isan'ny fahazoan-dàlana sy ny mety ho tohana ho an'ny 4K.
Waze dia mampiseho amin'ny infografika isan-karazany izay firenena tsara indrindra sy ratsy indrindra hitondra azy ireo
Waze dia namoaka andiana infografika izay mampiseho fampahalalana tena mahaliana momba ny firenena iza no tsara indrindra amin'ny fitondrana fiara.
Samsung dia mandefa ny rindrambaiko Game Tuner hametrahana ny fikirana sary amin'ny lalao video tsirairay
Game Tuner dia fampiharana vonona hanova ny endrika sary an-tsary an'ireo lalao napetraka amin'ny sisin'ny Galaxy S6 + sy Galaxy Note 5.
Antony 5 tsara hanandramana ETO Sarintany amin'ny findainao
ETO manolotra sarintany antony lehibe dimy ny Maps mba ahafahantsika manandrana ary mahita raha tena afaka manolo ireo safidy hafa maimaim-poana
[APK] Sintomy izao ny kinova Facebook ho an'ny Android vaovao miaraka amin'ny bokotra vaovao Like Reactions
Izahay dia mitondra anao mivantana amin'ny APK ny kinova Facebook ho an'ny Android vaovao miaraka amin'ny bokotra vaovao Like Reactions
HATOMICO, ilay rindranasa mamaky WhatsApp, Hangouts, Telegram ary zotra mafy aminao, ary maimaimpoana tanteraka.
Androany izahay dia manolotra App izay mamaky mafy ny WhatsApp voaray, nahazo ny Hangouts, voaray ny Line, nahazo ny Telegram, ny Twitters ary na ny fampandrenesana Google Now aza.
Swiftkey dia manambara ny Neural Alpha, keyboard vaovao mifototra amin'ny haitao neural network
Swiftkey dia mitondra antsika any amin'ny kitendry fanandramana antsoina hoe Neural Alpha izay manandrana maminavina ireo teny izay hosoratantsika amin'ny haitao vaovao.
Ahoana ny fomba hamakiana WhatsApp amin'ny fomba mafy ny hafatrao. (Na misy fampiharana)
Androany dia manome soso-kevitra fampiharana iray izahay izay mbola anaty fanjakana beta ho an'ny daholobe izay hahazoanay WhatsApp hamaky mafy ny hafatrao toy ny fampiharana apetraka amin'ny Android-nao.
Vaovao farany WhatsApp ary azonao atao ny mampifanaraka ny kaontinao amin'ny Google Drive
Manazava ny fomba fanavaozana ny WhatsApp izahay mba hahafahana mampifanaraka ny angona rehetra amin'ny Google Drive. Tsy mila miahiahy momba ny angona WhatsApp intsony ianao!
Meter, ilay fampiharana Google vaovao mba hananana rindrambaiko marani-tsaina kokoa
Google dia nandefa rindranasa mahaliana kokoa, Meter io, fampiharana izay hahatonga antsika hanana rindrambaiko mahay.
Ny rindrambaiko mandanjalanja feo tsara indrindra ho an'ny Android
Androany no anolorako anao ny App equalization feo tsara indrindra ho an'ny Android, fampiharana iray izay hihomehezana tsara miaraka amin'ny namanao.
Mandika lahatsoratra ao anaty fampiharana i Google Translate ankehitriny
Ny fanavaozana vaovao ny mpandika ny motera fikarohana, Google Translate, dia havaozina miaraka amin'ny safidy vaovao, dia ny afaka mandika lahatsoratra ao anaty apps.
Fotoana kely, ny zava-baovao avy amin'ny Twitter hitondra antsika fironana ankehitriny amin'ny sary
Twitter dia mandefa endrika vaovao antsoina hoe "Moments" ahafahantsika miditra amin'ny mahaliana indrindra an'ity tambajotra sosialy ity amin'ny alàlan'ny sary.
[APK] Telegram dia havaozina amin'ny kinova 3.2.3 miaraka amin'ny fanatsarana Marshmallow
Telegram dia nohavaozina mba hitondra endrika vaovao telo tena lehibe avy amin'ny Marshmallow: Mizara mivantana, Google Now amin'ny Tap, ary ny fanohanan'ny dian-tànana.
Fampiharana 10 izay manomboka amin'ny safidy maimaim-poana, mifanaraka amin'ny Android 5.0 API vaovao, ny fanovana sary na ny fanaovana selfie tsara indrindra.
Ny tambajotra sosialy lehibe indrindra, Facebook, dia hamela anao hametraka horonan-tsary ho sary mombamomba ny rindranasa Android anao.
Adobe dia mandefa fampiharana roa ao amin'ny Play Store indray hanatsarana ny famoronana sy ny fahaiza-mamorona amin'ny finday Android miaraka amin'ny Illustrator Draw and Capture CC.
Ny TUFFS dia rindranasa vaovao ahafahanao mitondra ireo apps tianao indrindra amin'ny takelaka fampandrenesana amin'ny findainao na tablette Android.
Peggo for Android manova Soundcloud sy YouTube ho audio ho an'ny playback ivelan'ny Internet
Peggo for Android dia rindrambaiko iray izay avy amin'ny biraonao ao amin'ny solo-sainao handraisana feo avy any Soundcloud sy YouTube.
Google Keep, angamba ny fampiharana fakana an-tsoratra Android tsara indrindra
Google Keep dia nihatsara rehefa nandeha ny fotoana mba hanolotra ny fitambarana tsara indrindra amin'ny hoe inona ny fanamarihana haingana sy ny endri-javatra mandroso
Steam dia mahazo fanavaozana lehibe ao amin'ny 2.1: Fifanakalozana entana, Hub lalao, hevitra ary maro hafa
Steam dia mety efa nilaza sahady fa manana ny safidy rehetra izy io amin'ny kinova desktop miaraka amin'ny kinova vaovao 2.1.
Ny DAEMON Sync dia mamela anao handrindra ireo rakitra amin'ny alàlan'ny tamba-jotra Wi-Fi eo an-toerana
Ny DAEMON Sync dia mitondra antsika ny traikefa DAEMON Tools rehetra amin'ny serivisy Android ho an'ny fampifanarahana rakitra amin'ny alàlan'ny tamba-jotra Wi-Fi eo an-toerana ihany.
Te hamaky ny WhatsApp ve ianao nefa tsy misy mahalala? Andramo ny StealthApp!
StealthApp dia fampiharana Android izay mamorona sehatra ambany ho an'ny hafatra WhatsApp. Afaka mamaky ianao nefa tsy mampiseho ny fotoanao ary mahalala izay mamaky ny anao.
[APK] Sintomy izao ny kinova Google Photos vaovao miaraka amin'ny fanohanan'ny Chromecast sy ny fanamarihan'ny olona
Androany dia mizara aminareo izahay ny kinova vaovao amin'ny Google Photos amin'ny endrika APK ho an'ny fametrahana an-tanana azy io alohan'ny hahatongavany amin'ny fomba ofisialy ao amin'ny Play Store.
Pulsar, mpilalao mozika maimaimpoana izay mamorona playlist mahay
Pulsar dia mpilalao mozika maimaim-poana tanteraka izay mety tianao amin'ny Playlists marani-tsaina sy Material Design
Raha miorim-paka ianao dia tsy handeha ny Android Pay Jereo hoe nahoana!
Ny vokatra vaovao izay hisolo an'i Wallet dia mampanantena fa hanova zavatra maro amin'ny tontolon'ny Android. Saingy, Google Pay dia tsy hifanaraka amin'ireo fantsona miorim-paka.
Androany izahay dia manoro hevitra ny Photo Resizer HD, iray amin'ireo rindranasa vitsy ho an'ny Android izay afaka manova ny haben'ny sary amin'ny fomba lehibe sy maimaim-poana.
Ahoana ny fomba fanakanana ny antso sy ny SMS amin'ny terminal Android anao
Anio dia asehonay fampiharana maimaim-poana ianao izay hanampy anay hanakana ny antso sy ny SMS amin'ny Android.
Google Play Services dia miomana amin'ny fahatongavan'i Marshmallow miaraka amin'ny fanatsarana ny API
Android 6.0 Marshmallow dia hiaraka amintsika afaka andro ary midika izany fa mialoha ny fahatongavany ny Google Play Services 8.1.
Microsoft mandefa ny Outlook Groups amin'ny Android ao anatin'ny Office 2016
Ny Outlook Groups dia ilay fampiharana Microsoft vaovao izay ao anatin'ny Office 2016 vaovao ary mila anao hanana famandrihana Office 365 hampiasaina
Khan Academy dia sehatry ny fianarana an-tserasera izay ahafahanao mianatra karazana lohahevitra maro toy ny siansa, vola na tantara ara-javakanto.
Anio dia asehonay anao ny fomba fanovana ny famahana ny sary avy amin'ny terminal Android anao amin'ny fomba tena tsotra.
Trick Android: Ahoana ny fampidinana atiny atolotra ao amin'ny Mega nefa tsy apetraka ny rindranasa Android
Anio dia asehonay anao ity fikafika Android tsotra ity izay hahafahantsika misintona atiny fampiantranoana ao amin'ny Mega nefa tsy apetraka ny rindranasa Android.
Ny Action Launcher dia nohavaozina miaraka amin'ny Quickfind ho endrika vaovao
Chris Lacy dia manohy manaporofo ny kalitaony amin'ny maha mpamorona rindrambaiko azy miaraka amina kinova Action Launcher izay mitondra Quickfind miaraka aminy.
Androany izahay dia manazava ny fomba fametrahana mari-drano amin'ny sary avy amin'ny terminal Android antsika amin'ny fomba mora sy tsotra miaraka amin'ny fampiharana maimaimpoana tanteraka.
Telegram dia natambatra androany ho zava-baovao amin'ny Channels, fitaovana vaovao hampielezana hafatra amin'ny mpihaino marobe.
Anio dia manolotra anao ny Bokin-tranonkala izahay, ny fampiharana tsara indrindra hakana pikantsary pejin-tranonkala.
Ahoana ny fampitomboana ny hafainganan'ny Chrome, tranokalan'ny tranonkala Google
Asehonay aminao anio ny tetika iray hahafahanay mampitombo ny hafainganam-pandehan'ny Chrome amin'ny kinova rehetra.
Minimal Todo, fampiharana maimaim-poana sy famolavolana fitaovana hitantanana ny karazana asa sy ny lisitra tokony hatao
Araho ireo asa sy zavatra rehetra tokony hatao isan'andro amin'ny Minimal Todo, fampiharana Material Design maimaim-poana.
[APK] Sintomy ny kinova Google Clock vaovao miaraka amin'ny fitomboan'ny alarem-pivoarana miadana kokoa sy maro hafa
Ny kinova 4.2 an'ny app Google Clock dia mahazo fahaizana mampiakatra tsikelikely ny feon'ny alarm ary manova ny ringtone amin'ny timer
Pikantsary no WhatsApp vaovao
Ny pikantsary dia iray amin'ireo zava-baovao ateraky ny WhatsApp ao amin'ny kinova manaraka mba hanamorana ny zavatra ho an'ny mpampiasa.
[MOD] Ahoana ny fametrahana ny Xperia Z5 Launcher amin'ny Android Lollipop anao
Anio dia asehonay anao ny fomba fametrahana ny Launcher an'ny Xperia Z5, ilay havoana faramparany an'ny firenena marobe Japoney.
ANDROID ALERT !! Ghost Push: lisitr'ireo fampiharana sy vaksinina voan'ny aretina rehetra
Androany izahay mitondra anao ny lisitry ny rindranasa voan'ny Ghost Push ary koa ny fitsaboana amin'ny vaksiny na famonoana otrikaretina.
[APK] Ny lalao Play dia miomana ny hanampy horonam-peo sy streaming amin'ny YouTube Gaming
Ny fampiharana Google Play Games dia toa ny iray mitantana ny fandefasana lalao hahafahana mijery azy ireo avy eo amin'ny YouTube Gaming.
[Trick WhatsApp] Fomba 2 handefasana WhatsApp backup
Androany amin'ity lesona vaovao ity dia asehonay anao ny fomba 2 handefasana WhatsApp.
Office Lens, ho ahy iray amin'ireo fampiharana scanner Android ratsy indrindra
Ao anatin'ny Android Scanner Apps, tsy misy fisalasalana ary ny hevitro manokana dia ny Office Lens no iray amin'ireo fampiharana scanner Android ratsy indrindra azoko andramana amin'ny Android-ko ary izany no antony nanapahako hevitra hampiseho aminao ny safidiko amin'ny Office Lens .
[Trick WhatsApp] Ahoana ny fomba hahalala hoe iza no namaky ireo hafatra tao amin'ny vondrona WhatsApp
Androany dia entinay aminao ity fikafika WhatsApp ity hahitanao hoe iza no namaky ireo hafatra tao amin'ny vondrona WhatsApp.
Mialà amin'ny iOS: miparitaka ny parodies sy ny fanehoan-kevitra ratsy
Ny fampiharana Apple voalohany ho an'ny Android dia tsy namela na iza na iza tsy hiraharaha. Ny fankahalana an'i Cupertino dia azo jerena amin'ireo fanehoan-kevitra sy naoty tao amin'ny Google Play.
Ahoana ny fomba hiarovana ny kaonty WhatsApp anao amin'ny tenimiafina
Anio dia asehonay anao ny fomba hiarovan-tenimiafina ny kaonty WhatsApp anao mba hiarovana azy tsy hijery banjinina.
Samsung's S Health dia misy amin'ny fitaovana Android rehetra
S Health, fampiharana an'ny Samsung ho an'ny fampihetseham-batana, dia azo alaina amin'ny fitaovana Android rehetra manomboka izao.
Inona ny Google Now On Tap ary ahoana ny fomba fiasany?
Androany dia hazavainay amin'ny antsipiriany ny Google Now On Tap ary ny fomba fiasan'izy io, ilay fiasa vaovao Google Now ho an'ny Android 6.0 Marshmallow
Tsy ho ela ny YouTube dia hanolotra ny fahafahan'ny streaming lalao amin'ny fotoana tena izy avy amin'ny serivisy ho an'ny smartphone sy tablette Android
Fampiharana fandefasan-kafatra nalefan'ny Microsoft, na inona ny WhatsApp an'ny mailaka, efa amin'ny Android
Ny rindranasa Send dia filokana vaovao an'i Microsoft amin'ny Android mba hanomezana fihodinana amin'ny fandefasana mailaka eo amin'ireo mpampiasa.
Ny fampiharana Android voalohany an'ny Apple dia eto
Zava-misy saika hitantsika ny fampiharana Apple Android ao amin'ny Play Store anio. Rindrambaiko iray izay hanampy anao handeha amin'ny Android mankany amin'ny iOS
Snapchat lasa freemium
Snapchat dia fampiharana trendetting ary izao dia te hanana loharanom-bola vaovao amin'ny alàlan'ny fifindrana mankany amin'ny maodelim-freemium.
Trick Android: Ahoana ny fomba hidirana amin'ny lalao miafina an'ny Chrome ho an'ny Android
Androany izahay dia manazava amin'ity fitaka Android ity, ny fomba hidirana amin'ny lalao miafina an'ny Chrome ho an'ny Android.
Ahoana ny fandisoana ny toerana misy ireo terminal Android anay
Androany izahay mitondra fitaka Android ho sandoka ny toerana misy ny terminal.
Azo ampiasaina amin'ny Android izao ny Spotify Running, ampifanaraho amin'ny gadon-dianao ny hiranao
Miaraka amin'ny Spotify Running dia hitarika ny tahan'ny dingana ataonao rehefa misy hira vaovao milalao ary manome anao ny antony manosika rehetra ilainao hampitomboana ny hafainganao.
Ny zavatra rehetra ilainao ho fantatra momba ny fitaovana fanangonam-bokatra Photoshop Mix
Anio dia asehonay aminao ny fomba fampiasana ny fitaovana cropping Photoshop Mix manaitra, izay ho ahy dia efa fampiharana ilaina amin'ny terminal Android-ko.
Ankehitriny ianao dia afaka misafidy rakitra marobe indray mandeha handefasana hetsika amin'ny andiany ao amin'ny Dropbox
Nohavaozina ny Dropbox miaraka amin'ny fahafahany manao hetsika amin'ny batch na mandika lahatahiry manontolo amin'ny toerana fitahirizana hafa
[APK] Sintomy ny RouterKeygen sy ny fomba fampiasana hamoahana ny lakilen'ny Wifi
Androany izahay dia mampiseho aminao ny fomba fampidinana ny RouterKeygen amin'ny tranokala azo antoka ary koa ny fomba fametrahana ary ny fomba marina hampiasana ny RouterKeygen.
Moto Body, safidin'i Motorola hifehezana ny toe-batanao
Moto Body dia azo alaina amin'ny fitaovana rehetra miaraka amin'ny Android 4.3 na avo kokoa ary mety hanara-maso ny hetsika ara-batana ataonao
[APK] Ahoana ny fametrahana Photoshop Mix amin'ny takelaka Android
Anio dia asehonay anao ny fomba marina hisintomana sy hametrahana Photoshop Mix amin'ny takelaka Android.
Ny rindranasa fakantsary Google ofisialy dia hampiditra ao amin'ny kinova 3.0, vaovao mahaliana toy ny smart burst.
Na dia tsy dia miely loatra aza ny mpamaky ny rantsan-tànana, dia manazava ny fomba hampiasana azy tsara sy hampiasana azy hahafantatra ny tenanao amin'ireo tranonkala samihafa izahay.
Ahoana ny fomba hamoronana horonan-tsary mampihomehy saribakoly sarimihetsika amin'ny endrikao
Anio dia asehonay anao ny fomba hamoronana horonan-tsary mahatsikaiky saribakoly sarimihetsika miaraka amin'ny endrikao fihetsika samihafa izay manomboka mihomehy ianao.
Ahoana ny fomba hametrahana rindrambaiko samy hafa amin'ny pejy birao tsirairay
Mampianatra anao izahay, amin'ny alàlan'ny rindrambaiko an'ny antoko fahatelo, ny fomba fametrahana haingon-tsary samy hafa amin'ny pejy birao tsirairay amin'ny Android.
7 amin'ireo fampiharana tsara indrindra ho an'ireo ankizy kely ao an-trano
Miaraka amin'ireo famoronana fampiharana 7 ireo dia hamporisihina ny fahaiza-mahatakatra na ny fianarana fiteny aza ho an'ny ankizy na ny ankizy kely ao an-trano.
1000 Gb fitehirizana rahona maimaimpoana miaraka amin'ny QuickPic
QuickPic dia manolotra antsika fitehirizana rahona 1000 Gb maimaim-poana miaraka amin'ny kinova farany misy.
Ahoana ny fomba hijerena maimaim-poana ny Atlético de Madrid VS FC Barcelona
Fomba roa hijerena ny Atlético de Madrid VS FC Barcelona maimaimpoana amin'ny Android fa tsy ho faty raha manandrana.
Mamorona Quick Notes sy Action Shortcuts miaraka amin'ny Memo Reminders
Memo Reminders dia rindrambaiko tena mahaliana hamorona naoty fohy ary hametahana azy ireo eo amin'ny tsipika misy na hetsika ao aminy handefasana karazana fampiharana rehetra
Periscope dia nampiditra ny fahaizana mandefa horonantsary amin'ny endrika marindrano ahafahana mampiasa an'io safidy io na izay mety ho ilay mitsangana.
Google mandefa fampiharana Wallet tsotsotra vaovao hanamboarana lalana ho an'ny Android Pay
Google dia nanangana rindrambaiko Wallet vaovao tsotsotra kokoa ho an'ny Play Store izay ampiasaina handefasana vola, izany hoe hanome lalana ny Android Pay
Ataovy miavaka ny orientation amin'ny efijery isaky ny fampiharana amin'ny Swivel for Android
Swivel dia fampiharana vaovao ahafahanao manamboatra ny orientation ho an'ny rindranasa tsirairay, izay misy koa ny lalana.
Ny kinova 5.9.11 an'ny Google Play Store dia mitondra antsika vaovao vaovao izay hihetsika rehefa hiseho ny faran'ny Nexus roa amin'ny faran'ity volana ity
Androany izahay mampahafantatra anao ny Magic Earth, ilay mpitari-dalana GPS Route 66 vaovao izay manolotra endrika tsy mampino maimaim-poana.
Ity kinova vaovao ity dia mitondra fanamafisana angona nohatsaraina izay midika fa mitahiry megabytes vitsivitsy isika isaky ny mampiasa azy hizaha
Ahoana no fomba ahazoana fampandrenesana rehefa mahazo fihenam-bidy ny fampiharana na lalao video amin'ny Android
Atorinay anao ny fomba handraisana fampandrenesana momba ny fivarotana fampiharana sy lalao video miaraka amina fampiharana izay miasa toy ny hatsarana.
Gluru dia serivisy web vaovao sy fampiharana ho an'ny fitaovana finday izay mety ho lasa mpanampy virtoaly anao hanome ny vaovao tsara indrindra.
Asehonay aminao ny fomba fiasan'ny Link Bubble, ilay mpizaha tranonkala amin'ny manjary miboiboika
Androany izahay dia mampiseho aminao ny fomba fiasan'ny Link Bubble, ary ny tena zava-dehibe, ny fomba fanamboarana ny Facebook hanokafana rohy ao amin'ny Link Bubble.
[APK] Wifi Keygen, hijerena ny haavon'ny fiarovana ny router Easybox na ny "hangalatra ny teny miafin'ny Wifi mpiara-monina aminay"
Androany dia mizara fampiharana Wifi Keygen izahay hanamarinana ny fiarovana ny Wifi anao na "hangalarana ny teny miafina Wifi an'ny mpiara-monina aminay"
Android Pay dia mety ho tonga amin'ny 16 septambra ho avy izao
Raha ny tsiliantsofina farany farany dia mety tonga amin'ny 16 septambra i Android Pay.
[APK] Sintomy ny Skype 6.0 miaraka amina endriny nohavaozina tanteraka ho Material Design
Androany izahay mitondra anao ny fisintomana ny Skype 6.0 ary asehonay aminao amin'ny horonan-tsary ilay interface interface ho an'ny mpamorona fitaovana vaovao sy manaitra
Fampiharana sakafo hariva misolelaka rantsantanana; Androany, Foodmeter
Foodmeter dia fampiharana iray izay hampahafantatra anao tsara izay nohaninao sy ny habetsaky ny kaloria nohaninao. Io no fampiharana mety indrindra amin'ny sakafo.
Ny fanavaozana ny Skype ho Material Design
Ny iray amin'ireo rindranasa tsara indrindra hanaovana antso an-tsary, Skype, dia havaozina miaraka amina interface vaovao sy amin'ny fomban'ny Material Design.
[APK] Nanjary mahaleo tena ny Street View miaraka amin'ny fampiharana azy manokana
Manomboka anio dia hiseho ny Street View ho fampiharana azy ao anaty vatasarihana fampiharana ny fitaovanao Android.
KinoConsole dia mandefa ny lalao PC amin'ny fitaovanao Android
Apetraho amin'ny PC ny serivera sy ny app amin'ny findainao ary ho vonona ianao hankafy ny lalao tsara indrindra amin'ny efijery finday miaraka amin'ny KinoConsole.
[APK] Ny Instagram 7.5 dia manatsara ny hafatra mivantana
Ankehitriny dia nohatsaraina tanteraka ny mivantana ho an'ny hafatra mivantana avy amin'ny Instagram mba hizarana sary akory nefa tsy very ny kiran'ny resadresaka
[APK] Ilay fampiharana Google nohavaozina miaraka amin'ny sary famantarana, kisary vaovao ary interface tsara nohatsaraina
Google koa dia nanavao ny fampiharana fikarohana amin'ny inona ilay logo vaovao sy ireo loko izay manjaka ankehitriny koa ao amin'ny Google Now.
Fanavaozana ny ES File Explorer amin'ny Design Material
Iray amin'ireo mpitantana rakitra Android tsara indrindra, ES File Explorer, novaina ho Material Design.
Ahoana ny fomba hijerena horonantsary amin'ny You Tube amin'ny windows mitsingevana
Ny mpilalao You Tube tsara indrindra, fampiharana iray nalaina avy tany am-boalohany sy afaka nilalao horonantsary You Tube tamina varavarankely mitsingevana, nilalao horonantsary tany aoriana na nisintomana horonan-tsary tamin'ny endrika video sy feo maro.
Google Maps dia mitondra antsika vaovao mifandraika amin'ny interface interface teo aloha sy ny kisarisary vaovao hahafantarana ny ora maro nidiran'ny besinimaro
LINE dia mitondra antsika ny mpandefa azy amin'ireo faritra ireo
LINE dia mandefa ny mpandefa azy any amin'ireto faritra ireto, izay midika fa mpandefa rindrambaiko misy rindrambaiko avo lenta sy safidy sasany.
ClearLock dia fampiharana izay mamela anao tsy ho variana amin'ny fampiharana hafa mandritra ny fotoana iray. Manana toetra mampiavaka azy io.
Quickpic novidin'i Cheetah Mobile, loza feno
Cheetah Mobile dia mpamorona iray izay manampy dokambarotra sy dokam-barotra be dia be amin'ny fampiharana azy, nahazo ny QuickPic masina izy.
Fampiharana IGrand sy iLetric Piano ho an'ny famoronana mozika natomboka tamin'ny Android
Rindrambaiko roa tonga amin'ny matihanina amin'ny mozika izay manana fitaovana Android miaraka amin'ny fankatoavana ny fahombiazany tamin'ny iOS.
Nohavaozina ny Instagram ary mamela anao handefa sary sy horonan-tsary amin'ny endrika haitao sy sary
Gaga antsika rehetra ny Instagram amin'ny fahaizana mampakatra sary sy horonan-tsary amin'ny endrika an-tsehatra sy portrair, milaza fa saika veloma amin'ny endrika toradroa.
Amazon Underground, fampiharana sy lalao video maimaimpoana tanteraka hanoloana ny "app maimaim-poana amin'ny andro"
Raha te hiditra amin'ny lalao video maimaimpoana tanteraka ianao nefa tsy misy micropayments sy manana kalitao tena tsara, Amazon Underground no valiny amin'izany.
Ny Hangouts Web APP ho an'ny solosainao manokana dia efa misy izao, ny fomba tsara indrindra hifehy ny Hangouts-nao
Efa ananantsika ny fampiharana ny Hangouts Web App na, amin'ny teny hafa, ny pejin-tranonkala manokana izay hahafahanay mifehy ny kaonty Hangouts anay tsy miankina.
BackPackTrack II, ny rindranasa Android tsara indrindra handraisana ny toerana misy anao, tena ilaina ho an'ireo mpitaingina tendrombohitra sy mpandehandeha.
Androany dia manolotra BackPackTrack II izahay, fampiharana manaitra izay ankoatry ny firaketana ny toerana misy anao dia ahafahanao manangona angona toa ny haavony, ny dia lavitra na ny dia lavitra amin'ny dianao na fitsangatsanganana.
Manomboka ny diany androany ny YouTube Gaming
YouTube Gaming no filokana goavambe an'i Google hankanesany any amin'i Twitch, serivisy fampandehanana an-tserasera amin'ny lalao video.
ANDROID ALERT !!: Certifi-Gate, fahalemena vaovao sy mampidi-doza ho an'ny Android izay mety hisy fiatraikany amina fantsona an-tapitrisany
Amin'ity ANDROID ALERT vaovao ity !! Mampitandrina anao izahay momba ny fahalemena vaovao ho an'ny Android fantatra amin'ny anarana hoe Certifi-Gate
[APK] Metal, ny mpanjifa Facebook tsara indrindra hatreto
Androany izahay dia manolotra Metal, izay tsy isalasalana fa ny mpanjifa Facebook tsara indrindra ho an'ny Android.
Ny mpitsidika tranonkala Link Bubble dia lasa afaka tanteraka
Link Bubble dia iray amin'ireo fampiharana izay nahagaga ny tena tato ho ato noho ny fampiasana ireo boninkazo mitsingevana noho ny fandefasana azy ao aoriana
[APK] Sintomy izao ny kinova WhatsApp vaovao miaraka amin'ny kisary sy ny safidy hampiatoana ny fifandraisana
Efa misy eto amintsika ny kinova WhatsApp 2.12.252 vaovao misy ny kisary comb, ny fiarahabana any Vulcano ary ny fifandraisana moana
Beta ho an'ny daholobe mpanampy amin'ny feo Cortana azo jerena ao amin'ny Google Play
Microsoft dia manohy manao ny asany ary ankehitriny dia mandefa ny beta ampahibemaso an'ny Cortana any Etazonia amin'ny alàlan'ny programa beta ao amin'ny Play Store.
Mitadiava haingana rakitra, fifandraisana ary fampiharana amin'ny findainao finday miaraka amin'ny Andro Search
Andro Search dia fampiharana vaovao mamela anao hanao fikarohana haingana amin'ny telefaona na takelaka maimaim-poana tanteraka.
[APK] Sintomy ary apetaho ny widget amin'ny toetr'andro Galaxy S6 amin'ny Android rehetra
Androany izahay dia mizara aminareo rehetra ny widget misy ny toetrandro Galaxy S6 sy ny fomba fametrahana azy hahafahanao mankafy azy amin'ny terminal Android rehetra.
Floatify ao amin'ny kinova 8.0 dia manome fiovana amin'ny fampandrenesana Heads-up amin'ny Android
Floatify dia havaozina amin'ny kinova 8.0 izay manatsara ny fampandrenesana lohany izay tafiditra ao amin'ny Android 5.0 Lollipop.
Xender, famindrana rakitra tsy mora velively
Ny rindranasa Xender vaovao dia ahafahanao mamindra rakitra amin'ny fomba intuitive sy mampahazo aina tanteraka avy amin'ny finday avo lenta mankany amin'ny solosaina na terminal hafa.
Miavaka amin'ny tolotra hafa i Kaboom satria tsy mila ny misoratra anarana handraisana hafatra manimba tena rehefa mandeha ny fotoana.
Ny fitaovana Chromecast an'i Google dia malaza be any Etazonia, ary lasa fitaovana streaming mivarotra faharoa.
Google Photos, nahazoana alalana nomena anao, dia hanolotra sary vitsivitsy amin'ny hetsika isan-karazany nitranga taloha tahaka ny Facebook amin'ny tambajotran-tserasera misy azy.
Microsoft dia mialoha ny Google miaraka amin'ny kinany 'Google Now on Tap' ao amin'ny Bing Search
Ny Fikarohana Bing an'i Microsoft dia nohavaozina miaraka amina endrika vaovao "nalaina" avy amin'i Google miaraka amin'ny "Google Now on Tap" izay mandefa ny fikarohana ifotony
[APK] Sintomy ny kinova vaovao an'ny Google Now Launcher mivantana avy amin'ny Android 6.0 Marshmallow
Google Now Launcher dia manana kinova vaovao avy amin'ny topi-maso fahatelo ho an'ny mpamorona Android 6.0 Marshmallow.
Tinkerplay dia manampy anao hamolavola endrika manokana ho an'ny fanontana 3D
Ny fampiharana Android Tinkerplay dia manampy anao mamorona tarehimarika 3D haingana sy mora. Azonao atao ny manonta azy ireo amin'ny mpanonta 3D.
QKSMS, fampiharana ho an'ireo hafatra SMS lasa loharano malalaka sy malalaka
QKSMS dia loharano misokatra ary fampiharana maimaim-poana tanteraka amin'ny fitantanana ny hafatry ny SMS amin'ny fomba mety indrindra.
Ny kinova WhatsApp vaovao dia hamonjy ny tantaranao ao amin'ny Drive
Toa hiverina amin'ny iray amin'ireo lahasa tena sarobidy indrindra ny kinova farany an'ny fampiharana WhatsApp: ny fitsitsiana ny tantara ao amin'ny Drive.
Yahoo Livetext dia azon'ny rehetra izao
Ny Livetext an'i Yahoo dia misongadina amin'ny maha-fampiharana manolotra ny fahaizana mifampiresaka amin'ny alàlan'ny hafatra an-tsoratra sy an-dahatsary nefa tsy misy feo
Google dia nandefa andrana Android hanehoana ny fampiharana Android sy Android Wear manavao indrindra
Avy amin'ny andrana Android dia azonao atao ny manakaiky ireo fampiharana loharano misokatra farany azo ampiasaina, izay ahafahanao maka kaody ho anao manokana.
Ahoana ny fametrahana Lenovo Dolby Atmos amin'ny Android 4.3 na terminal avo kokoa
Anio dia asehonay anao tsikelikely ny fomba fametrahana Dolby Atmos avy amin'i Lenvo amin'ny karazana Android 4.3 na terminal avo kokoa.
Facebook dia manomana ny famoahana fampiharana vaovao ho fampandrenesana vaovao
Facebook dia mamorona rindranasa izay manana hery lehibe nefa tsotra be fotsiny haharaka ny vaovao mafana indrindra.
Microsoft OneNote dia nohavaozina miaraka amin'ny "bara mitsingevana" hamoronana naoty fohy rehefa mampiasa fampiharana hafa
Ny OneNote dia nohavaozina miaraka amin'ny fanampiana izay midika hoe bara mitsingevana hamoronana naoty fohy raha mampiasa fampiharana hafa ianao.
LastPass lasa maimaim-poana saingy mila mandoa vola ianao raha hiovaova amin'ny telefaona mankany amin'ny takelaka na PC
LastPass dia maimaim-poana, na dia te handoa finday mankany amin'ny takelaka / PC aza ianao dia tsy maintsy mandoa.
[APK] Sintomy ny kinova Spotify for Tablets ary apetraho amin'ny findainao Android
Sintomy ny apk Spotify novaina ho an'ny Takelaka hahafahany mametraka amin'ny finday Android ary manafoana ny filalaovana kisendrasendra tsy maintsy atao.
Pushbullet izao dia manolotra fanohanana ny encryption farany-amin'ny-farany amin'ny fampandrenesana, Universal Copy & Paste ary SMS
Pushbullet izao dia manolotra fanohanana fanaingoana farany ho an'ny fitaratra, SMS, ary fampandrenesana Universal Copy & Paste. Kinova vaovao mifantoka amin'ny fiarovana.
Inona no miandry antsika amin'ny YouTube Gaming
Zava-manahirana roa no hifanatrika manomboka izao ho an'ny streaming mivantana sy ny lalao. Ireto ny YouTube Gaming sy Twitch.
Bestie, ny app Camera360 ho an'ny selfies
Bestie dia fampiharana izay manandrana manatsara ny selfie miaraka amina fitaovana fanovana sary.
[APK] Misy amin'ny Hangouts 4.0 ankehitriny miaraka amin'ny fanavaozana tanteraka ny Material Design ary maro hafa
Hangouts 4.0 miaraka amin'ny Material Design ary vaovao marobe tena mahaliana no hita izao. Sintomy ny APK mba hanandrana dieny izao.
Joaquim Vergès dia manatevin-daharana ny ekipa Twitter hanatsara ny fampiharana Android
Twitter dia hanana eo amin'ny laharany iray amin'ny iray amin'ireo mpandrindra fampiharana antoko fahatelo tsara indrindra amin'ny tambajotra sosialy malaza.
Mihantona ve ny findainao rehefa manokatra sary avy amin'ny WhatsApp? Mampianatra anao ny famahana izany izahay
Ampianarinay anao ny fomba hamahana ny iray amin'ireo olana WhatsApp malaza indrindra. Amin'ireto fikafika ireto dia hosakananao tsy hiantona ny finday rehefa manokatra sary avy amin'ny fampiharana ianao.
Ahoana ny fomba hampiasana ny Cortana an'i Microsoft ho mpanampy am-peo am-peo amin'ny Android
Amin'ny Android dia azonao atao izao ny mampiasa ny mpanampy amin'ny feo Cortana amin'ny toerana misy anao ao amin'ny kinova farany navoakan'i Microsoft.
Ahoana ny fomba handovana ny kaonty Facebook-tsika amin'ny mpianakavy na namana iray
Androany izahay dia manazava tsikelikely ny fomba hanaraka mba handovana ny kaonty Facebook-nay
Ahoana ny fomba hamerenanao WhatsApp amin'ny Google Drive ary hamerenanao azy avy eo
Androany dia mizara ny WhatsApp APK farany izahay ary asehonay aminao ny fomba backup WhatsApp amin'ny Google Drive ary ny fomba hamerenana azy io avy eo.
Fampiharana 4 hanesorana ny farango anananao amin'ny finday avo lenta
Fampiharana 4 izay ho mora ampiasaina hifehezana ny fanampiana anao amin'ny finday Android. Hanamora kokoa ny famoahana ny tenanao izany.
Mahafantatra sy mampiasa Periscope, ny serivisy mivantana mivantana
Periscope dia iray amin'ireo fironana manerantany amin'izao fotoana izao ho an'ny streaming mivantana. Rindrambaiko iray izay mifamatotra akaiky amin'ny Twitter.
Fampiharana Android avo lenta 3 izay tsy ho hitanao ao amin'ny Play Store
Fampiharana Android 3 izay azonao sintonina maimaim-poana any ivelan'ny Play Store. Ny tsirairay amin'izy ireo dia avy amin'ny sokajy hafa.
Ahoana ny fomba ahafahana mamela sy manafoana ny rafi-kiheba Chrome amin'ny Android Lollipop
Ao amin'ny Android Lollipop, ny tranokala Chrome dia manana rafitra tabilao vaovao izay ampianarinay anao hiala ao amin'ity lahatsoratra ity.
Mpijery tranonkala roa tena haingana izay tsy dia mahatadidy fitadidiana velively
Asehonay anao ireo mpizaha tranonkala roa izay tonga amin'ny Android miaraka am-piandohana ny fampiasana fahatsiarovana kely ary mety tsara ho an'ireo tobim-pahombiazana ambany.
Turbo Alarm, fampiharana famantaranandro fanairana maimaim-poana tanteraka amin'ny safidy maro
Turbo Alarm dia fampiharana miavaka toa ny famantaranandro fanairana izay afaka manolo tanteraka ilay tonga amin'ny toerana misy anao amin'ny Android.
Ahoana ny fomba hidiranao amin'ny Netease avy amin'ny Android mihitsy tsikelikely
Androany dia manazava ny fomba hidirana amin'ny Netease avy amin'ny Android anay izahay ary afaka 2 minitra.
[APK] Sintomy sy apetraka ny kinova ES Material Design File Explorer
Eto ianao manana ny apk hanintona sy hametraka ny kinova ES Explorer Design File Explorer
Fampiharana Fitness 4 izay tsy azonao adino
Amin'izao andro fahavaratra izao dia afaka mahatsapa isika fa mila mampiasa vatana. Fampiharana 4 izay manampy anao amin'ny Fitness
Tinycore, fampiharana iray hifehezana ny CPU sy RAM an'ny finday avo lenta
Tinycore dia fampiharana kely iray izay manara-maso ny satan'ny bateria, ny CPU ary ny fahatsiarovana RAM avy amin'ny tsipika status amin'ny telefaona Android-nao.
WhatsApp dia hanisy ny emoticon an'ny paellencien Valenciana
Vetivety dia hanisy emojiis vaovao 15 ny WhatsApp, ao anatin'izany ny iray maneho ny valizy valenciana valizy. Ho ampidirina io noho ny fangatahan'ny mpampiasa.
Chrome for Android dia nohavaozina amin'ny kinova 4.4
Chrome for Android dia novaina amin'ny kinova 4.4 ao anatin'izany ny fampiasa vaovao.
Afaka mandefa hafatra manokana ivelan'ny daholobe amin'ny FireChat ianao izao
Afaka mandefa hafatra manokana amin'ny alàlan'ny fampiharana fandefasan-kafatra FireChat amin'ny alàlan'ny fifandraisana toa ny Bluetooth na Wi-Fi ianao.
#Paellaemoji na ahoana ny fomba hidiran'ny Valencien Paella ao amin'ny WhatsApp
Ao amin'ny lisitry ny emotikon vaovao ampidirina, ny an'ny Valencian Paella ao amin'ny WhatsApp dia natambatra.
Focus dia fampiharana galeriana miorina amin'ny tag mba handaminana tsara kokoa ny sarinao rehetra
Ireo tag amin'ny sary dia iray amin'ireo kalitaon'ity fampiharana antsoina hoe Focus ity ary noho izy ireo dia azonao atao ny mandamina ny sarinao rehetra amin'ny fomba manokana.
Google manatsara ny safidy beta atolotra an'ireo mpamorona ao amin'ny Play Store
Google dia manolotra safidy bebe kokoa amin'ny mpamorona hahafahan'ny mpampiasa manandrana ny beta amin'ny fampiharana azy ireo avy amin'ny Play Store.
Ireo no rindranasa ankafizin'ny Alfonso de Frutos
Fifanarahana amin'ireo fampiharana Android tianao indrindra an'ny Alfonso de Frutos, tonian-dahatsoratra ao amin'ny Androidsis. Ahoana ny hevitrao momba ireo rindranasa ireo?
Ahoana ny fomba hanaovana ny sisiny amin'ny WhatsApp
Ny sisiny malaza ao amin'ny WhatsApp dia misy izao, noho izany dia mila manao dingana kely dia kely isika hahafahako mankafy an'ity emoticon ity.
Nahemotra ny Hangouts 4.0 fa misy antony marim-pototra
Ireo mpampiasa Android Wear dia hahazo tombony lehibe amin'ny Hangouts 4.0 araka izay nianarantsika androany.
Ny fomba tokana ahafahana mankafy ny WhatsApp amin'ny Android Tablet
Ampianarinay ianao anio hankafy ny WhatsApp amin'ny takelaka Android amin'ny fomba ara-dalàna sy eken'ny WhatsApp
Lazainay ny tantaran'ilay fampiharana fandefasan-kafatra default, WhatsApp. Hatramin'ny niandohany alohan'ny Android ka hatramin'ny fivarotana azy amin'ny Facebook sy ny fanatsarana amin'ny ho avy.
Yahoo mandefa Livetext, fampiharana fandefasan-kafatra vaovao izay manambatra horonantsary tsy misy feo miaraka amina hafatra an-tsoratra
Miaraka amin'ny Yahoo Livetext ianao dia hifandray amin'ny namanao na fianakavianao amin'ny alàlan'ny lahatsoratra sy horonan-tsary, saingy tsy misy feo izany ka zavatra hafa ny resaka.
Azavainay ny fomba tsara indrindra hanafoanana ny habaka amin'ny Android. Hanatsara ny zava-bita sy ny herin'ny findainao finday ary amin'ny fomba tsotsotra.
CudaSign dia iray amin'ireo fampiharana ilaina amin'ny Android Tablets izay ahafahantsika manao sonia nomerika sy mameno antontan-taratasy mora foana.
Haneho ny fotoana be atao indrindra amin'ny toerana iray i Google izao
Ny motera fikarohana Google malaza izao dia hampiseho ny ora fidiran'ny olona eo an-toerana.
Androany isika hiresaka momba ireo rindranasa tiako napetraka tamin'ny findaiko.
Ny mpanampy manokana malaza an'i Google dia efa mamela anao handefa hafatra amin'ireo rindranasa navoakan'ny orinasa ivelan'ny Google, toa ny WhatsApp, Viber sy ny hafa.
Ireo rindranasa tiako indrindra napetrako amin'ny finday Android-ko ary manampy ahy hamokatra bebe kokoa na hanana fotoana malalaka.
Mpisafidy sary vaovao no fitsapana Instagram vaovao hanamorana ny fizarana sary amin'ny alàlan'ity tambajotra sosialy ity.
[APK] Arrow Launcher, mpandefa Microsoft vaovao ho an'ny Android
Gaga anay indray i Microsoft amin'ny fampiharana avo lenta miaraka amin'ny Arrow Launcher, mpandefa fampiharana izay tsy azonao adino.
Fampiharana 3 hanatsarana ny traikefa fampandrenesana ny hidin-trano amin'ny Android Lollipop
Fampiharana lamba fanidiana telo amin'ny Android Lollipop izay manatsara ny traikefan'ny mpampiasa amin'ny fiasa mahafinaritra sasany.
Ny YouTube dia nohavaozina manokana ho an'ireo mpamorona atiny na youtuber
YouTube dia mahazo kinova vaovao izay manasongadina kiheba vaovao telo sy ny fahatongavan'ireo fitaovana marobe hanovana horonantsary.
Tiako ny findaiko manampy ahy amin'ny fifehezana ny fiainako manokana sy matihanina, ny rindranasa manamora ny fivezivezena ary ireo mamela antsika hamadika nomerika ny zava-drehetra.
Nandalo ny bokotra FAB i Google ary nanova azy teo amin'ny bara hitsin-dàlana ao amin'ny Google Keep
Ao amin'ny app Keep-note note, Google dia manolo ny bokotra FAB, izay niaraka tamin'ny Android Lollipop, miaraka amin'ny bara fihetsika haingana.
[APK] Sintomy sy apetraka ny kinova Google Photos vaovao miaraka amina endrika vaovao maro
Androany izahay mitondra anao ny kinova Google Photos vaovao feno vaovao mahaliana momba ny fifehezana ireo rakikira.
TapDeck, mitadiava sary vaovao tsara kalitao isan'andro ho an'ny findainao
TapDeck dia rindrambaiko iray izay ankoatry ny fahazoana sary mihetsika avo lenta, manana asan'ny tambajotra sosialy mba hahitana sy hizarana ny sary an-tsary
[APK] Sintomy izao ny kinova WhatsApp vaovao feno vaovao mahaliana
Androany izahay dia manolotra sy mamaha ny kinova WhatsApp vaovao feno vaovao mahaliana.
[APK] Afaka jerena tsara ao amin'ny YouTube izao ireo horonantsary mitsangana
Azontsika atao ihany ny milalao ireo horonantsary mitsivalana farany ireo araka ny tokony ho izy noho ny andiany vaovao an'ny YouTube amin'ny Android.
[APK] Google Maps 9.2 dia manampy ny fitehirizan'ny toerana notetezinao
Google dia nanakambana ny fanisan-taona ny tantaran'ny toerana ao amin'ny Google Maps ho zava-baovao vaovao tato anatin'ny volana vitsivitsy noho ny serivisy saritany.
Smart Screen On Off, hankafizanao ny efijery marani-tsaina amin'ny terminal Android anao
Androany dia manolotra ny fampiharana Smart Screen On Off maimaim-poana izahay, fampiharana iray izay hanome ny terminal Android misy fàfana efijery marani-tsaina.
Gentle Alarm, ny herin'ity fampiharana famantaranandro fanairana ity
Na dia tsy dia misy kely aza ny volavola, ny Gentle Alarm dia misongadina amin'ny karazany maro karazana raha oharina amin'ireo fampiharana hafa.
Ireto ny rindranasa ankafizin'i Francisco Ruiz: Fampiharana tena ilaina amin'ny Android-ko
Androany aho dia manolotra ireo rindranasa ilaina ho an'ny Android, izaho dia Francisco Ruiz ary ity no zavatra tsy tokony hanjavona amin'ny terminal Android-ko.
Adobe Lightroom dia havaozina amin'ny kinova 2.1 miaraka amina fandikana kopia, fanatsarana ny interface ary maro hafa
Ankoatry ny fiasa vaovao telo manaitra, ny kinova 2.1 an'ny Adobe Lightroom dia miaraka amina fanamboarana bibikely.
[APK] Sintomy sy apetraka ny kinova You Tube farany misy fanatsarana vaovao sy mahaliana
Androany izahay dia manazava ny fomba fampidinana sy fametrahana ny kinova You Tube farany mba hankafizanao ireo fiasa vaovao alohan'ny olon-kafa.
Ny kinova Telegram vaovao dia mampifandray ireo mpilalao YouTube, Vimeo ary SoundCloud anatiny ao anaty resaka
Telegram dia mampiditra ireo mpilalao anaty YouTube, Vimeo ary Soundcloud ao anaty chat ho zava-baovao ao amin'ny kinova vaovao.
[APK] Izay rehetra omen'ny OG You Tube Downloader anay, ny fampiharana hijerena sy hisintomana ny atiny avy amin'ny You Tube mivantana mankany amin'ny Android-nao
Androany, ankoatry ny fizarana ny APK an'ny OG You Tube Downloader, asehonay anao koa ny fomba tsotra fampiasany azy amin'ny video.
Izay ananantsika amin'ny Android miaraka amin'i Cortana, mpanampy ny feo
Cortana no mpanampy amin'ny feo Windows 10 izay tonga amin'ny Android amin'ny beta ary manana safidy maro noho ny nandrasana.
Ny fampiharana Microsoft Hyperlapse amin'ny fanaovana horonantsary mandalo fotoana dia efa azon'ny rehetra izao
Hyperlapse dia fampiharana vaovao azo alaina amin'ny rehetra rehefa avy nandao ny beta izay natao ho an'ny fitaovana sasany ihany.
Google app dia havaozina miaraka amin'ny loko tsy miandany
Ny rindrambaiko famantaranandro Google dia nohavaozina tamin'ny fampidirana loko tsy miandany kokoa ankoatry ny fanitsiana ireo lesoka samihafa amin'ny kaody anatiny amin'ny fampiharana.
[APK] Sintomy ary apetraho Cortana ho an'ny Android alohan'ny famoahana ofisialy azy amin'ny Android
Anio dia avelanay anao ny apk Cortana ho anao Android mba hampidina sy hanandrana alohan'ny fanombohana ofisialy ho an'ny Android.
Ny fandefasana mailaka amin'ny fomba mora kokoa dia izay vaovao amin'ny Inbox
Inbox izao dia mamela anao hanemotra ny mailaka amin'ny fomba mora sy tsotra kokoa izay manafaingana ny zavatra amin'ny lafiny rehetra. Antsipiriany kely momba ny lanjany.
Cloudifile ho an'ny Android dia mandrindra sy mampiditra ny angona ao anaty lahatahiry Dropbox ao amin'ny solo-sainao
Cloudifile dia miaraka amina iraka hanolorana fiarovana sy fiainana manokana bebe kokoa ao amin'ireo lahatahiry Dropbox ananantsika amin'ny solosaina.
Plex dia iray amin'ireo safidy tsara indrindra hilalao atiny multimedia amin'ny efijery finday na amin'ny fahitalavitra Smart.
WiFiMapper dia fampiharana tonga lafatra mandritra ireo fialantsasatra ireo hahitana teboka WiFi maimaim-poana ho anao any akaikin'ny misy anao.
Hetsika streaming Motorola amin'ny 28 Jolay 2015. Inona no tianao hatolotra anay?
Androany dia nahazo fanamafisana ofisialy ny hetsika streaming Motorola vaovao izahay ny 28 Jolay 2015 ho avy izao amin'ny 15:XNUMX tolak'andro.
Pushbullet ho an'ny Android dia mahazo fanohanana feno amin'ny hafatra SMS
Pushbullet dia efa nanatevin-daharana ny fanohanana feno ho an'ny hafatra SMS amin'ny Android sy amin'ny desktop.
WesmartPark, hipetraka any Barcelona sy Madrid mora sy mora vidy
Androany dia manazava ny fiasan'ny WesmartPark izahay, fampiharana izay ahafahantsika mijanona ao Barcelona sy Madrid mora sy mora, mitahiry hatramin'ny 60% amin'ny taha mahazatra amin'ny toeram-piantsonan'ireo fiara.
[APK] [ROOT] Ahoana ny fametrahana sy fampidinana ny Hound Voice Assistant hitsapana azy tsy misy fanasana
Anio dia asehonay anao ny fomba fametrahana sy hampiatoana ny Hound Voice Assistant, tsy misy kaody fanasana ary na dia any ivelan'ny faritanin'i Etazonia aza.
Skype 5.5 dia mitondra fampidirana am-botoana mora kokoa sy rohy amin'ny chat
Ny kinova vaovao 5.5 an'ny Skype dia mitondra fomba iray mora kokoa hidirana ary inona no rohy teo aloha tao amin'ny chat.
Fampiharana mahavariana ho an'ny Android: Androany LiveBoard, solaitrabe fotsy
Androany izahay dia manolotra ny Liveboard, whiteboard mifampiresaka, fitaovana fiaraha-miasa miaraka amin'ny vondrona manaitra ho an'ny terminal Android.
Nokia HERE Maps ho an'ny daholobe beta navoaka tamin'ny Android
Nokia HERE Maps dia efa manana ny beta ampahibemaso azon'ny mpampiasa Android alefa mba hahazoana ny vaovao farany.
Ahoana ny fomba tsy hanajanonana ny backup Google Photos na dia efa nesorina aza ny fampiharana
Ireo fikirana hanafoanana ny famerenana ny Google Photos dia azo jerena ao amin'ny toe-javatra Google fa tsy amin'ny fampiharana mihitsy.
nPerf Speed ​​Test, angamba ny app tsara indrindra handrefesana ny hafainganan'ny fifandraisan Wi-Fi / 3G / 4G anao
nPerf dia fampiharana vaovao tsara izay manandramana ny streaming, ny hafainganana, ny ping, ny fitetezana tranonkala ary maro hafa. Fampiharana tsara tonga amin'ny Android.
Twitch dia nohavaozina miaraka amina mpilalao mitsivalana mitsivalana mitovy amin'ny YouTube
Mandrosoa varavarankely mitsingevana miaraka amin'ny playback an'ny fantsona ao amin'ny Twitch miaraka amin'ny fanavaozana vaovao rehefa manao zavatra hafa amin'ny findainao.
Fomba ahazoana mankasitraka ny endrik'i Google Photos
Nasehonay anao ny fomba ahafahana mampiasa ity fitaovana ity amin'ny sarin'i Google avy any ivelan'ny Etazonia ka handamina sy hametahana ny sarany ny sarinao.
Mandrosoa ny rindranasao rehetra amin'ny fihetsika miaraka amin'ny Model Launcher
Miaraka amin'ny Model Launcher dia manokatra ireo fihetsika izahay handefasana fampiharana amin'ny fomba tena mora ary tsy mila tadidinao ireo fihetsika rehetra.
Manampy safidy vaovao hifehezana izay hita ao anaty fahana vaovao ny Facebook
Facebook dia hanangana safidy vaovao hifehezana ny feed news amin'ny herinandro ho avy.
[Root] [APK] Sintomy ary apetaho ilay mpandefa Launcher vaovao ho an'ny mpamorona Android M Preview 2 alohan'ny olon-kafa
Androany aho dia manazava ny fomba fampidinana sy fametrahana ny fampandrenesana fanavaozana Android M vaovao 2 Launcher amin'ny Android rehetra.
AZ Camera, angamba ny fampiharana fakantsary tsara indrindra ho an'ny Nexus 5 na Nexus 6 anao
AZ Camera no mety ho fampiharana fakantsary tsara indrindra ho an'ny Nexus 5 na Nexus 6 anao, satria manararaotra ny API fakan-tsary Android Lollipop.
[APK] Google Messenger 1.4 dia miaraka amin'ny fandefasana toerana, sticker ary maro hafa
Google Messenger dia miaraka amina kinova vaovao, 1.4, izay mitondra ny fandefasana toerana, ny sticker ary ny tsipika fitetezana resadresaka.
Ataovy Launcher, na ny fomba fametrahana ny interface HTC Sense amin'ny terminal Android rehetra
Androany izahay dia manome soso-kevitra fampiharana maimaim-poana ho an'ny Android izay hanahafana ny fampiasa HTC Sense an'ny terminal toy ny HTC One M9
Manomboka androany dia manana ny keyboard Fleksy ianao avy amin'ny Play Store maimaim-poana, na dia misy micropayments ho an'ny lohahevitra sy ny fanitarana aza.
Live Screen Streaming, ny fampiharana Sony handefasana ny lalaoo amin'ny Twitch sy YouTube
Twitch na YouTube no sehatra roa ahafahanao mijery mivantana ireo lalao mivantana avy amin'ny Live Screen Streaming.
Action Launcher nohavaozina ho 3.5 miaraka amina bara haingam-pandeha vaovao ho hevitra tsara
Action Launcher dia nohavaozina amin'ny zava-baovao toy ny Quickbar na bara manokana izay ahafahanao mametraka hitsin-dàlana amin'ny Facebook na Twitter.
[APK] Google Play Store dia nohavaozina miaraka amin'ny fanatsarana ny fahitana
Google Play Store dia manohy mampiseho ny antsipiriany be dia be miaraka amin'ny fanatsarana roa vaovao eo amin'ny lafiny fahitana an'ilay fampiharana.
Avy amin'ny Play Store dia azonao atao ny misintona ny fampiharana Amazon Cloud Drive ofisialy mba hampifangaroana ireo rakitra avy amin'ny kaonty Amazon.
Tuber, fampiharana vaovao mifantoka amin'ny famandrihana fantsona ao amin'ny YouTube
Raha manana fantsona maro fisoratana anarana ao amin'ny YouTube ianao, ny Tuber dia fampiharana tena ilaina hitantanana azy ireo ary tsy ho very eo amin'izy ireo toa ny nitranga tamin'ny ofisialy.
Ny sary ao amin'ny Instagram dia navadika ho 1080 × 1080 amin'ny Android
Nanapa-kevitra ny Instagram ny hampiakatra ny haben'ny vahaolana amin'ny sary ho 1080x1080 mba hanehoana tsara ireo sary zarainay.
Fahita matetika ny fangalarana smartphone. Mba hisorohana dia manolotra ireo rindrambaiko tsara indrindra hahitana ny finday avo lenta misy anao na aiza na aiza misy azy.
Ao amin'ny Android Lollipop dia azontsika atao ny mampiasa fika kely hanakanana ny fampandrenesana tafahoatra amin'ny fampiharana iray.
Ny fivoaran'ny YouTube hatramin'ny 60fps amin'ny Android: hatramin'ny niandohany ka hatramin'izao.
Izahay dia mamakafaka ny fivoaran'ny sehatra streaming malaza indrindra amin'ny Internet, YouTube, hatramin'ny niandohany ka hatramin'ny 60fps vao nampidirina tamin'ny Android.
Afaka fotoana fohy dia tena mora ny fizarana GIF mihetsika avy amin'ny Facebook Messenger
Facebook dia te hanamora ny fandefasana sary mihetsika GIF an-tserasera amin'ireo serivisy roa misy ary bokotra natokana.
Fampiharana Android tena ilaina rehefa mandeha dia
Raha tianao ho tonga lafatra ny dia ataonao, dia manolotra anao ny fampiharana maimaimpoana tsara indrindra ho an'ny sidina, hotely, trano fisakafoanana, fandikan-teny ary maro hafa.
Manampia poalety kabary amin'ny sarinao miaraka amin'ny sary Balloon avy any Sony
Ny Balloon Photo dia rindrambaiko tonga lafatra ho an'ny fialantsasatra hamoronana sary mahafinaritra izay hampiasaintsika ny feontsika hanampiana balaonina amin'izy ireo.
Fampiharana mahavariana ho an'ny Android: Androany, Navigation Bar - Soft Keys na ny fomba famoronana bara fitetezana virtoaly
Anio dia asehonay aminao avy amin'ny Incredible Applications ho an'ny Android ny fampiharana manaitra izay mamela anay hamorona bara fitetezana virtoaly.
Ahoana no fomba hamoronana tantara amin'ny tanana amin'ny Google Photos
Google Photos dia manana fahaizana lehibe hamorona tantara amin'ny tanana avy amin'ny sary raisinao amin'ity fialantsasatra fahavaratra ity.
Easy Copy, fampiharana izay mandefa ho azy ny lahatsoratra izay adikao amin'ny fampiharana hafa
Miaraka amin'ny Easy Copy dia azonao atao ny mandika nomeraon-telefaona iray avy amin'ny pejin-tranonkala iray handefasana mivantana an'io lahatsoratra nadika io ao amin'ny fampiharana antso.
Ahoana ny fametrahana Motorola Smart Screen amin'ny Android 4.1 na avo kokoa
Androany izahay dia manazava ny fomba hametrahana ny fampiasa Motorola Smart Screen amin'ny terminal Android tsy mila Root na zavatra hafa toa izany.
Fampiharana 3 hahafantarana izay aloanao amin'ny findainao amin'ny faktiora elektrika isan'ora
Izahay dia mitondra fampiharana 3 ho anao amin'ny Android izay hifehezana ny faktioran-jiro vaovao avy amin'ny findainao ary amin'izany dia afaka mamonjy euro vitsivitsy ianao.
Ankehitriny dia tadidin'i Google Now izay fampiharana tianao hapetraka ho an'ny baikon'ny feo sasany
Google Now dia mivoatra hatrany hanome antsika ny fahatsapana fa malina kokoa izy io. Ankehitriny dia hahatsiaro ny fampiharana nofidina tamin'ny baiko am-peo iray izy.
AC / DC dia misy amin'ny serivisy fandefasana mozika toy ny Play Music sy Spotify
Ny AC / DC dia miorina amina serivisy fandefasana mozika marobe, ao anatin'izany ny Play Music sy Spotify. Hetsika iray ho an'ny mozika.
Ny fampiharana YouTube dia efa manolotra fanampiana amin'ny famerenana amin'ny laoniny horonantsary amin'ny 60 fps
Avy amin'ny fitaovana Android, azonao atao izao ny milalao horonan-tsary amin'ny 60 fps hankafizanao ny kalitao tsara hita maso izay manasongadina ny fihenan-tsakafo.
Gello, tranonkala vaovao an'ny CyanogenMod mifototra amin'ny Chromium sy ny fanaingoana
Gello dia mpamorona tranokala web an'ny CyanogenMod izay manasongadina ny fanaingoana ary miorina amin'ny Chromium.